ကျန်းမာရေး Archives - San Thitsa
ကြွက်နို့များကို မနာမကျင်ပဲ လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့တဲ့နည်း
Zawgyi ကြွက်နို့များကို မနာမကျင်ပဲ လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့တဲ့နည်း ကြွက်နို့၏ သဘောသဘာဝမှာ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအပေါ် ဂရုစိုက်မှုနည်းပါး၍ လက်ခြေထောက်၊ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတို့ပေါ်တွင် ပေါက်လေ့ ရှိပြီး ပျောက် ကင်းအောင် ကုသရန် ခက်ခဲလှပါသည်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတို့ကကြွက်နို့ကို မီးရှို့သောနည်းဖြင့် ကုကြသည်။အဆင်ပြေလှသည်မရှိပါ။အချို့မှာမူ ဓားဖြင့်လှီးဖြတ်၍
Zawgyi ကလေးငယ်များ နှာပိတ်နေလျှင် ကလေးသူငယ်များ နှာစေး နှာပိတ် ဖြစ်တဲ့အခါများမှာ ဆေးအဖြစ်အသုံးဝင်တဲ့ ရွှေဖရုံသီးအညှာရွှေဖရုံသီး၏ အညှာကို ကလေးသူငယ်များအတွက် ဆေးဝါးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလိုရပါတယ်။ ကလေးသူငယ်များ နှာစေး နှာပိတ် ဖြစ်တဲ့အခါများမှာ သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ဒီဆေးနည်းလေးဖြင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကလေးသူငယ်များ နှာစေးနှာပိတ်ဖြစ်တဲ့အခါများမှာ
သားအိမ်ကင်ဆာတောင် ပျောက်တယ် ဆို တဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ နှင့် လယ်ပုဇွန်လုံး
Zawgyi သားအိမ်ကင်ဆာတောင် ပျောက်တယ် ဆို တဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ နှင့် လယ်ပုဇွန်လုံး တို့ အမေအတွက် ဆေးတွေအများကြီးရောက်လာပါပြီ…. အမေက သားအိမ်ကင်ဆာကို နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရတာပါ ဆေးသွင်းလိုက် ဓာတ်ကင်လိုက်နဲ့ ဆေးရုံမပြတ် တက်လိုက် ဆငိးလိုက်နဲ့
Zawgyi အစာအိမ်ရောဂါ၊ လေရောဂါ သမားများအတွက် ကိုယ်တိုင် လွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံး နနွင်းခါးလုံး မန်မာလူမျိုး အများစု ဖြစ်တတ်တဲ့ အစာအိမ်ရောဂါ၊ လေရောဂါရှိသူတွေအတွက်ဖြစ်စေ၊ အလှအပ ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ချင်သူတွ အတွက် ဖြစ်စေ အဆင်ပြေစေတဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့
Zawgyi ဒေါက်တာအောင်စိုးဝင်းပြောသော ရဲယိုအကြောင်းသိကောင်းစရာများ မေး- ရဲယိုကဆေးလား ? ဖြေ- ရဲယိုသည်ဆေးမဟုတ်ပါ။ဆေးထက်အဆင့်များစွာမြင့်မားပြီးသဘာဝအလေ့ကျပေါက်ရောက်သောအသီးတမျိုးပါ ။ မေး-ရဲယိုသီးကိုဘာရောဂါမှမဖြစ်သေးခင်ကြိုတင်စားလို့ရပါသလား ? ဖြေ – စားလို့ရပါတယ် ။ထန်းလျက်နဲ့သော်၎င်း ၊ပျားရည်နဲ့သော် ၄င်း ၊ရောပြီးစားလို့ရပါတယ်။အစေ့ တွေကိုမစားစေချင်ပါ ၊အူအတက်မှာသွားပိတ်နေမှာစိုးလို့ပါ
ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ထိရောက်တဲ့ နာနတ်သီး အသုံးဝင်ပုံ
Zawgyi ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ထိရောက်တဲ့ နာနတ်သီး အသုံးဝင်ပုံ ကိုဗစ် မဖြစ်အောင် နာနတ်သီး စားရမလား?Australia က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက နာနတ်သီး အူတိုင်မှာပါတဲ့Bromalin ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းဟာ covid virus ရဲ့ spikeကို ပျက်ဆီးစေပြီး
Zawgyi တုပ်ကွေးဖျားအတွက် အိမ်တွင်းဆေးနည်းလေးများ Influenza ( Fl u ) တုပ်ကွေးဖျားအတွက် အိမ်တွင်းဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးချင်ပါတယ် ။ဖလူ ( Flu ) လို့ ခေါ်တဲ့ တုပ်ကွေးဖျားဟာ ဗိုင်းရပ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်တာပါ ။
Zawgyi ကရင်ဆရာကြီး ပြောပြတဲ့ ရင်ကြပ်ပန်းနာ လက်တွေ့ပျောက်ဆေး ပန်းနာရင်ကြပ် ရှိသူတွေ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေး ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးပါရစေ ဤဆေးနည်းမှာ ကရင်ဆေးဆရာတစ်ဦးထံမှ ရှိသောဆေးနည်းဖြစ်၏။အကြောင်းမသိလျှင် ရယ်စရာဖြစ်သော်လည်းသုံးစွဲရာ၌မူကား တကယ်စွမ်းသောဆေးနည်းဖြစ်ပေသည်။ ချိန်ခွင်အလွယ်တကူမရှိသောအရပ်ဒေသများတွင်ဖော်စပ်သောဆေးဖြစ်သဖြင့်အချိန်အတွယ်ကားအတိအကျမပါပေသို့သော် ခန့်မှန်း၍အညီအမျှချိန်ယူနိုင်ပါသည်။ (မှတ်ချက်= ချိန်ခွင်ရှိရာအရပ်၌ဖြစ်မူကား
Zawgyi အချဉ်ရည် ၊ခြင်ဆေးခွေ အန္တရာယ် နှင့် ကင်ဆာရောဂါ အသုပ်ဆိုင်တွေ အကြော်ဆိုင်တွေ ထုံချိုင်းဆိုင်တွေ၊ အကင်ဆိုင်တွေ၊ တုတ်ထိုးဆိုင်တွေမှာ နေ့စဉ် လူတွေ မြိန်ရေယှက်ရေ စားနေကြတာကတော့ အန္တရာယ်ရှိ တားမြစ်ဆိုးဆေး နီနီရဲရဲတွေရယ် ၊ အစာအိမ်